Amaqhinga okuba nabalandeli abaninzi kwi-Instagram | Iindaba zeGajethi
Amaqhinga ali-11 okufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram
IBlumex | | I intanethi, software
Ukuba sele ungumsebenzisi owonwabileyo we-Instagram, emva koko unokuba nenani elikhulu labantu abakulandelayo ukuba ubunayo iakhawunti, ixesha elininzi; kodwa imeko isenokungafani nakubantu abasandula ukubhalisa, mhlawumbi babe ngamaxesha anzima njengoko bengenabalandeli ngaphandle kwezihlobo zabo.
Ngaphandle kokuba ubhenele kwizenzo ezingekho mthethweni ukuze uthandwe Instagram, Kweli nqaku siza kukhankanya iinkcukacha ezimbalwa onokuzifunda ukuze (ngokusemthethweni) abalandeli abaninzi kwiakhawunti yakho.
1 Iingcebiso ezibalulekileyo zokuba nabalandeli kwi-Instagram
2 1. Kutheni ufuna ukuba nabalandeli abaninzi kwi-Instagram?
3 2.Chaza ukugxila kwi-Instagram
4 3. Inkcazo yeprofayile yakho kwi-Instagram.
5 4. Soloko ubeka izinto ezinomdla
6 5. IiHashtags kwi-Instagram
7 6.Nika ukubaluleka kubalandeli bakho kwi-Instagram
8 7. Yenza izimvo ngeStatigram
9 8. Ukuthumela iifoto ngononophelo kwi-Instagram
10 9. Isilumkiso ekusebenziseni i-hashtag kwi-Instagram
11 10. Hlala kude nabo bathengisa abalandeli nge-Instagram
12 11. Ungalibali ukuthatha inxaxheba kunye nabalandeli bakho kwi-Instagram
Iingcebiso ezibalulekileyo zokuba nabalandeli kwi-Instagram
Okokuqala, kufuneka sikhankanye ukuba zininzi "iinkampani" ezihlala zibonelela ngeenkonzo ukuze umntu oqhelekileyo abe nabalandeli abaninzi, into engafanelekanga ukuyenza ukusukela ekuhambeni kwexesha, Instagram unokucima iakhawunti yakho ngokujonga ukuba wophule imigaqo-nkqubo yabo.
1. Kutheni ufuna ukuba nabalandeli abaninzi kwi Instagram?
Leyo yimeko yokuqala kunye neyona ibalulekileyo ekufuneka uyihlalutye, kuba ayifani ukuba nabalandeli abaninzi ngenxa yesizathu sokuzingca kunaleyo ekuyo ufuna ukukhuthaza ishishini, Kukho abo bantu bafuna ukwenza iifoto zabo okanye iividiyo zithandwa ngakumbi ngezizathu ezahlukeneyo kunye neemeko.
Chaza ugxininiso Instagram
Ukusuka apha ngasentla, ukuba umntu ufuna ukuba abahlobo bakhe bamlandele kwinethiwekhi, emva koko unokubeka iifoto ngaphandle kwesithintelo, okt bonke abo bahlobo okanye usapho bavela khona. Kodwa ukuba ufuna ukukhuthaza iifoto kuye wonke umntu kwaye hayi nje kwisangqa esivaliweyo sabazana, ke imifanekiso (awuzange uyibambe) akufuneki ibonise abantu kuyo. Umzekelo, iifoto zokutya zodwa, kuba abantu besitya into engathandekiyo kwabaninzi. Endaweni yoko, usomashishini kufuneka athumele iifoto zeshishini kunye nezinye ezisingqongileyo.
3. Inkcazo yeprofayile yakho kwi Instagram.
Xa bekutyelele, into yokuqala abaya kuyibona yinkcazo kwiprofayili yakho kwaye baya kuthatha isigqibo sokuba bayayibona into yakho okanye cha. Ngesi sizathu, kuyacetyiswa ukuba ubeke umyalezo onomtsalane kodwa olula ngaphakathi kwiprofayili, into ebonisa umdla kwabo bakholelwayo, abaya kuyithanda into oyicebisileyo. Ke unoluvo, bhala into ongathanda ukuyifunda kwenye iprofayili enomdla.
4. Soloko ubeka izinto ezinomdla
Zonke iifoto kufuneka zinomdla, kwaye akufuneki kubekho iifoto ezikruqulayo. Khumbula ukuba iindwendwe zakho ziya kukhangela kwezona zithuba zamva nje, ke ukuba uthumele into engenantsingiselo, ulahlekelwe ngumlandeli ngokulula. Ukuba awunazinto zilungileyo unokuzipapasha, kungcono ungashicileli nantoni na ngaloo mhla.
5. IiHashtags kwi-Instagram
Njengakwi-Twitter, iiHashtags zikwabalulekile kwi-Instagram, into eya kuthi ibambe umdla wabo bafuna uhlobo oluthile lweeprofayili kunye neefoto ngaxeshanye.
6. Nika ukubaluleka kubalandeli bakho kwi Instagram
Nje ukuba uqale ukuba nabalandeli, qala ujonge iiprofayili zabo kwaye unxibelelane nabo; Ungalandela ezinye zeefoto zabo (azikho ninzi), "Uyazithanda", kwaye ude uphawule. Ukutya kwakho kuya kondla ngokukhawuleza ngenxa yale meko; kodwa musa ukuwenza lo msebenzi nawo wonke umntu okulandelayo, kuba iprofayile yakho iya kuwela kwinto ngaphandle kweenqobo kwaye ngaphandle kokubonakala.
7. Yenza izimvo ngeStatigram
Kulabo abangafuniyo ukukhangela kunye nezimvo ngqo kwiakhawunti yabo Instagram, I-Statigram inokuba yenye indlela elungileyo, kuba isetyenziswa kwiwebhu nakweyiphi na ikhompyuter apho kulula ukuyisebenzisa ikhibhodi. Beka i-hashtag yesihloko onomdla kuyo kunye ne-voila, uluhlu lweziphumo ziya kuvela kungekudala ukuba uziqwalasele kwangoko.
8. Ukuthumela iifoto ngononophelo kwi-Instagram
Abalandeli bakho bayakuxabisa ukuba ungababethi ngefoto umzuzu ngamnye okanye rhoqo, ke kuyacetyiswa ukuba imifanekiso oyipapashayo imbalwa kodwa inomdla kubo, kuba ngabo abaya kukulandela.
9. Isilumkiso ekusebenziseni ii-hashtag kwi Instagram
Ukuba usebenzisa ii-hashtag ezininzi ekumakeni iifoto, oku kungathathelwa ingqalelo njengogaxekile, ke kuyacetyiswa ukuba ubeke iithegi ezifanelekileyo hayi nantoni na eza entlokweni yakho ukuze ufumane ingqalelo.
10. Hlala kude nabo bathengisa abalandeli kubo Instagram
Inyani yokukhula ngokuthe ngcembe kwabalandeli kwi Instagram Isenokuba sisizathu sokuba abanye abasebenzisi bafune ukufumana okungakumbi ngexesha elifutshane, ke baya kwabo bathengisa olu hlobo lwenkonzo; hlukana nabo, kuba baya kuzama ukufumana imali kuwe.
11. Ungalibali ukuthatha inxaxheba kubalandeli bakho kwi Instagram
Thumela rhoqo evekini kwaye hayi yonke into ngosuku olunye; Kwakhona, xa ubona amagqabantshintshi otyelelo lwakho, phendula kubo ukuze ugcine umdla kwiprofayili yakho. Yikholwe okanye hayi, "enkosi" Iya kubaluleka kubalandeli bakho, kuba indawo engenanto yokuxhalaba kwabo ayizukubenza babuye.
Olunye ulwazi-ngoku i-Instagram ikuvumela ukuba ufake ngokulula iifoto kunye neevidiyo nakweyiphi na iwebhusayithi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I intanethi » Amaqhinga ali-11 okufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram
IHalloween sele ibhiyozelwa kwiVenkile yePlayStation
Ukuzikhethela: Imidlalo yam emi-5 endiyithandayo ye-iOS